News 18 Nepal || सन्दीपले भने, ‘टाढा भए पनि मन भने नेपालमै छ’
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेले विजया दशमीको शुभकामना दिएका छन् । सामाजिक संजाल ट्वीटरमार्फत उनले शुभकामना दिएका हुन् । उनी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट खेल्ने क्रममा युएईमा छन् ।
दिल्ली क्यापिटल्समा आवद्ध सन्दीपले अहिलेसम्म १ खेल पनि खेल्न पाएका छैनन् । दिल्लीले ११ खेल खेलिसकेको छ । सन्दीप यसअघि दुई पटक दिल्लीबाट खेलिरहेका छन् । यसपालि उनले एक खेल पनि खेल्न पाउने हुन् कि हैनन् भन्ने आशंका छ ।
आईपीएलको ११ औं संस्करण खेल्न पाएपछि सन्दीपको फ्रेन्चाइज टी-२० क्रिकेटको यात्रा विश्वमै निकै अगाडि बढेको छ । उनले ट्वीटरमा यस्तो लेखेका छन्, ‘हिन्दुहरुको महान् चाड शुभ बिजया दशमीको पावन अवसरमा माता दुर्गा भवानीले हामी सबैको कल्याण गरुन् । सुख, शान्ति, समृद्धी तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभ कामना ! सुरक्षित र स्वास्थ्य रहनुहोस् ! सम्पूर्णमा मेरो माया। टाढा भएपनि मन भने नेपालमै छ। शुभ दशैं।
भोलि माइक टाइसन र रोय जोन्सबीच प्रतिक्षित बक्सिङ भिडन्त
टी-२० विश्वकपका लागि नेपालले सोझै ग्लोबल छनोट खेल्न पाउने
पेले भन्छन्, ‘म्याराडोना र म एकदिन आकाशमा सँगै फुटबल खेल्ने छौं’